Mu'tamarkeena 11-aad oo dhacaya Nov 23-25
Ayah 53 of Sûrat Az-Zumar
Waxaa dhammaan jamaacatul khayr ugu bishaaraynaynaa inuu soo dhawaaday Mu'tamarkii sanaawiga ahaa ee Masjidkeenu qaban jiray.
Mutamarka sanadkaan wuxuu qabsoomayaa November 23-25, 2018 oo ku beegan Jimce, Sabti iyo Axad. Wuxuuna ku qabsoomi doonaa Schoolka sare ee English High School ee ku yaal 114 McBride St, Jamaica Plain.
Cinwaanka sanadkan ee Mutamarka ayaa ayaada 21-aad ee Suuratul Imran (قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ)
Culimada nagala soo qayb galaysa sanadkaan waxaa kamid ah: Sh Yusuf Abdulle, Sh. Abdulbary Yahye, Sh. Salax Abdisamad, Sh. Mohamud Garyare, Sh. Cuman Yusuf, Sh.Abdullahi Canshur iyo Macalin Mahdi Irobe.
Arimaha lagu soo bandhigi doono Mutamarka waxaa kamid ahaan doona: Muxaadarooyin-Somali iyo English ah, Anaashiid, Qur'an Akhris, Tarmamo qaybo kala duwan lehn Su'aalo iyo Jawaabo. iyo qaybo kale oo badan.
hadaba, waxaan ku dhiiri galinaynaan dhamaan inta wanaaga iyo khayrka jecel inay nagala soo qayb galaan kulankaan si aan wadajir uga wada faa'iidaysano kulan diimeedkaan 11 sano jirsaday. Qof walba waxa hela fariintaan waxaa isna masuuliyad kasaaran tahay inuu sii gaarsiiyo dadka kale aan fursadda u helan in fariimahayagu gaaraan.
Hoos ka dheeho Flyerka Mu'tamarka wixii dheeraad ah.
Fajr 5:35 AM 6:00 AM
Dhuhr 11:35 AM 12:00 PM
Maghrib 4:13 PM 5m after
5:36 PM 6:30 PM
Dhismaha Masjidka oo heerkii ugu danbeeyey Maraya